Somali News 07.22.21 | KWIT
Finkenauer iyo Muhlbauer ayaa la filayaa inay berrito ku sugnaadaan magaalada Sioux City si ay u muujiyaan taageerada ay u hayaan “Meelmarinta Xeerka Pro” ama “Ilaali Xaqa Abaabulka”. Sharciga Pro wuxuu baabiin doonaa sharciyada "xaq u-yeelashada".
War-saxaafadeed ka soo baxay Xisbiga Dimuqraadiga ee Gobolka Woodbury ayaa sheegaya in taageerayaasha ficilku ay isugu soo ururayaan Dhismaha Federaalka hortiisa 4-ta galabnimo.
Kooxdu waxay ka codsaneysaa Senetarada Iowa Grassley iyo Ernst inay taageeraan ficilka xoojinta ururada.
Iowa ayaa la filayaa inuu ka helo ilaa $ 170 milyan doolar dacwada la socota afar shirkadood oo lagu eedeeyay inay gacan ka geysteen qabatinka cudurka opioid ee qaranka iyo dhibaatada xad dhaafka ah.
Saamiga gobolku wuxuu ku yimid qayb ka mid ah $ 26 bilyan oo heshiis ah oo ku lug leh daroogada sameeyaha Johnson iyo Johnson iyo saddex shirkadood oo qaybiya oo aan qirin wax masuuliyad ah oo qayb ka ah heshiiska.
Lacagta ayaa ugu horeyn lagu bixin doonaa daaweynta iyo waxbarashada.